Induction yekuputira kushandiswa kwekutengesa kwepipeline, kupera kukodzera
musha / Applications / Induction Preheating / Induction Kupisa
Category: Induction Preheating Tags: induction preheat welding, induction preheat welding machine, induction preheat welding maitiro, induction preheating machine, induction preheating kurapwa, preheating induction kuchinjisa, preheating welding, preheating Welding induction, preheating welding muchina, PWHT
Chii chinonzi induction kupisa?
Induction preheating iyo inoshandiswa apo zvinhu kana zvishandiso zvinopisa nekugadziriswa kusati kwaitwa mberi. Zvikonzero zvekushisa kusati dzasiyana. Muchengetedzwa uye mhepo yekambani, makirasi emakanda anotanga kushandiswa asati agadziriswa extrusion. Zvipfeko zvitsva zvinotanga kupiswa pamberi pekuchera uye zinc kupfeka. Induction preheating inoderedzawo zvigadzirwa zvisati zvanyunguduka, uye inogadzirira matapu nemapayipi ekugadzira. Mobile preheating solutions inogadzirisa kugadziriswa kwekutakura magungano.
DAWEI Induction preheating systems zvinoshanda zvakanyanya, zvichikonzera kuwanda kwekugonesa kwesimba. Paunenge uchifambisa zvishandiso zvesimbi uye fesheni netambo, diode rectifiers inochengetedza simba rinogara riripo re 0.95, nokudaro richibvisa mari inoshandiswa simba. Purogiramu nguva dzinopfupika, zvakare. Uye kuenderera mberi zvinongororwa zvinoshandiswa zvinoreva imwe coil imwe inokwanisa kubata zvakakura mazaya emitengo. Induction preheating systems are compact uye zviri nyore kubatanidza mumigwagwa iripo yakarongwa kana yakarongwa.
Induction preheating inoshandiswa mumotokari, mechanical, aeronautical, electrotechnical, nyeupe yezvinhu uye makambani ekuvaka zvikepe. Nzvimbo huru yekushandiswa ndeyekupisa kwekushanda. Yedu MYD series air cooling induction heat heat systems inoshandiswa mumhenderekedzo yegungwa rekushongedza kwepasi. MYD series air cooling heat units iyo inowanzoenderera kumaofurati emafuta nemapurisa kuitira kuti kugadziriswa uye kugadziriswa.
IYY air air cooling induction heat systems ndiyo inonyanya kushandiswa preheating weld heat treatment Process.